Fanaovana politika Mbola ny omaly tsy niova …
Fanamboarana fotodrafitrasa, mamakivaky tanàna amin`ny fiara marobe arahin`ny fanentanana hifidy ny kandidà sady nampahafantatra ny laharany, fizarana ireo kojakoja (T-shirt…) samihafa hanentanana mpifidy… no fampielezan-kevitra eto amintsika.
Ny omaly tsy miova ny fanaovana politika eto amintsika na dia olom-baovao ny ankamaroan`ireo mandrafitra ny lisitr`izay kandidà ho depiote. Miverina hatrany ny politikan`ny mpanam-bola. Tsiahivina fa ho an’ny filatsahana ho solombavambahoaka dia 5 tapitrisa ariary no sandan’ny fisoratana anarana. Mbola manginy fotsiny ny fikarakarana ny fampielezan-kevitra izay tsy maintsy andaniana volabe koa raha toa ka te ho lany. Hoy ny ny SeFaFi, karazana olona no hita ao anatin`ny lisitr`ireo mpifaninana ho solombavambahoaka toy ny ondrankondrafana, ny tampohin-karena, ny mpanararao-paty, misy mpamono olona voaaro ho tsimatimanota, mpandrahara mpanao kolikoly … Ka izany ve hitondra rivo-pivoarana eny amin`ny Antenimieram-pirenena tokoa ? Tsy maintsy manao izay hamerenany ny volany ireo olona ireo na tiana na tsy tiana. Mbola hanjaka ve ny herin’ny vola eo amin`ny Antenimieram-pirenena ? Mbola hanjaka hatrany ve ny malety sy ny fividianana olona ? Misy zavatra vaovao andrasan’ny vahoaka amin`ireo kandidà fa raha ny zava-misy, ny teo aloha ihany no havadibadika satria mila fanovana izy ireo.